Gavin Hunt: Ngiphoxeke kabi | isiZulu
Gavin Hunt: Ngiphoxeke kabi
UGavin Hunt ‘uqinisekisa’ uStuart Baxter njengomqeqeshi omusha weBafana
Umqeqeshi ophebeza amahlebezi amyamanisa neBafana
UGavin Hunt uncome imisebenzi yeMamelodi Sundowns
Cape Town – Umqeqeshi weBidvest Wits, uGavin Hunt, akazange agudle iguma ngokugxeka abadlali bakhe nemuva kokuthola isibhaxu kanye nokukhishwa emqhudelwaneni weNedbank Cup yiJomo Cosmos.
EzikaJomo Sono zihambe phambili ngesiwombe sokuqala ngegoli elakhiwe yindodana yakhe, uMatsilele. U-Onassis Mntambo ube eselivalela phakathi yize noma amaClever Boys ebuye aphindisela ngesiwombe sesibili ngegoli lokulinganisa elishaywe uMogakolodi Ngele.
OLUNYE UDABA: Kusasekuseni ukuba sekungakhulunywa ngokugawulwa yizembe - OwePirates
Ngemuva kwalokho awekho amanye amagoli abuye angena kulo mdlalo obudlalelwa enkundleni yezemidlalo iTsakane Stadium nokuholele ekutheni umdlalo uye ku-extra time, kwase kwaba amaphenathi, nalapho Ezenkosi ziwine khona ngo-5-4.
“Kunzima ukudlala neCosmos, besazi ukuthi sibhekene nani futhi zonke izincomo zikubona. Benze obekumele bakwenze futhi badlulele phambili,” uHunt ucashunwe kanjalo yiKickOff.
“Kusasa, akekho ozokhumbula ukuthi badlulele kanjani phambili kodwa ukuthi badlulile. Angazi ukuthi besiligcina kanjani ibhola ngaphakathi kanye nangaphandle kwebhokisi, kodwa iningi labadlali engibanike ithuba bebengekho ezingeni.
“Ufunda okuningi ngabantu abathi benikwe ithuba kodwa bangalisebenzisi. Ngakho sizophinde siqoqane bese siphinde siqale kodwa ngiphoxeke kabi ngoba bengicabanga ukuthi senze okwanele ukuzama ukuthi sisebenze [ ukuze siphumelele].
“Kuhlale kunzima ukudlala noJomo [Sono] futhi besikwazi lokho, ngakho bekumele sibe ngcono. "